Lavanila: tsy misy mpividy ny any Sava | NewsMada
Nidina be ny vidin’ny lavanila maina, amin’izao fotoana izao, any amin’ny faritra Sava. Raha iray tapitrisa ariary (1 000 000 Ar) ny vidin’ny iray kilao talohan’ny 2019, tsy misy afa-tsy iray hetsy ariary (100 000 Ar) sisa izany izao. Mahita ireo mpandraharaha any an-toerana fa vitsy feran’ny fanjakana ny mpividy sy mpanondrana tonga any an-toerana. Teo aloha, nampiakatra ny vidiny, betsaka ny mpividy, nifaninanana ny fanangonam-bokatra, nanondranana azy tany ivelany.
Mifanohitra amin’izay ny zava-misy ankehitriny, vitsy ny mpividy, nefa ny vokatra betsaka. Tsy maintsy mihena ny vidiny. Nampanantena ihany koa ny fanjakana fa tsy latsaky ny 250 dolara ny kilao, izany hoe, raha amin’ny sandam-bola ankehitriny, tokony ho manodidina ny iray tapitrisa ariary ihany.
Mitondra fanazavana anefa ny ao amin’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana (Mica), fa noho ny krizy ara-toekarena nentin’ny Coronavirus ihany no nanimba ny varotra eran-tany. Vitsy ny tinady any ivelany amin’ireo karazam-bokatra maro fanondrana, toy ny lavanila. Nihena, araka izay koa ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Ireo vokatra hafarana miditra eto kosa, misondrotra ny vidiny, anisan’izany ny vary. Antony mampiakatra ny vidin-javatra amin’ireo entana ilaina andavanandro (PPN).